कथा : कदर « Sansar News
कथा : कदर
२७ असार २०७७, शनिबार ०९:५७
छेउमा थाल राख्दै आमाले भन्छ – ला ! भात खा । म हुन्जेल स्याहार्छु। म मरे पछि के गर्छेस ? आमाको कुराले कताकता हर्केको मनमा साह्रै बिझ्छ। न्याउरो मुख लाएर भन्छ – आमा ! तिमी संगै म नि मर्छु । आँचलले आँसु पुछ्दै आमाले भन्छिन – धेरै गफ नला। खुरुक्क भात खा ।
जनयुद्धको क्रममा तत्कालिन शाहीसेनासंगको भिडन्तमा हर्केले आफ्नो दुवै खुट्टा गुमाएको छ । संगिनी पनि त्यै भिडन्तमा सहादत भईन । अतित तितो नमिठो कुरा सम्झिदै भात खान्छ। आमाले भन्छ – के ! ट्वाल्ल परि’रा। खुरुक्क भात खा। आमाको कुरा सुनेर झसंग हुन्छ। भात खान थाल्छ।
छेउमा बसेर पंखा हम्किदै आमाले भन्छ – तँ ! संगका जागिर खाएर काठमाडौमा घर बनाएर मजाले बसेको छ। क्वै ! माननीय मन्त्रि मैस्सके। तँलाई सम्झेर क्वै भेट्न आ’का होईन। आमाको कुरा सुनेर जवाफ दिन्छ – आमा ! मैले घर बनाउन। माननीय मन्त्रि हुन् व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनयुद्ध लडेको हैन। मैले त सामुहिक सबैको सम्पूर्ण जनताको अनि मेरो प्यारो देशको भविष्य र मुहार फेर्न जनयुद्ध लडेको हो ।
हर्केको कुरा सुनेर आमाले भन्छ – खै ! त के पाईस तैंले ? न्याउरो मुख लाएर आँखा भरि आँसु लिएर भन्छ – हो ! मैले केहि पाईन आमा। तर देशले धेरै कुरा पायो। जनताका छोरो-छोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भए। देशले समावेशी लोकतन्त्र पायो। गङ्गा चौधरी सांसद बनिन। नोकरीमा आरक्षण भो महिला, जनजाति, उत्पिडित वर्ग समुदायले सरकारी जागिर पाए। राजनीतिमा महिला र उत्पिडित जातिले समाबेस हुन् पाए। जनताहरु आफ्नो कर्तव्य र अधिकार प्रति सचेत र जागरुक भए। यै त हो खुशीको कुरा आमा।
पानि पिउंदै – कसैले के पायो ? के गुमायो ? आआफ्नै भाग्यको कुरा हो। कसैको चित्त दुखाई होला हुनसक्छ। मैले आफ्नो दुबै खुट्टा गुमाए पनि खुशी छु। किन कि देशको आमुल परिवर्तनको निम्ति जनयुद्धमा सरिक हुने सौभाग्य पाए। जन्मदिने आमाको लागि केहि गर्न नपाए नि। नेपाल आमाको लागि यति गर्न अवसर पाए। म आफैलाई सौभाग्यशाली ठान्छु। आज कसैले मलाई नसम्झे नि। इतिहासको कुनै कालखण्डमा सम्झिनेहरु अवस्य हुन्छन। कतिपय मान्छेहरु भौतिक धन सम्पतिलाई शान्ति सबै थोक ठुला ठान्छन। तर म आत्मिक शान्तिलाई ठुलो मान्छु। यै ढेडो र गुन्द्रुक मेरो लागि सबै थोक छ। अनि तिमी आमा, मेरी स्वर्ग हौ।
बिहान खायो, साँझ भोकै। तेरै पार्टीको सरकार छ। केहि सगयोग गर्यो ? – दुखेसो मनाउ गर्दै आमाले भन्छिन। थालमा हात जुथ्दै भन्छ – आमा ! व्यक्तिगत स्वार्थको लागि केहि पाउन, भोलि पार्टीले मलाई सहयोग गरोस् भनेर मैले जनयुद्ध लडेको हैन। साथीहरु देश परिवर्तनको महान काममा व्यस्त होलान। आज नसम्झे नि कुनैदिन साथिहरुले मलाई र मेरो योगदानलाई अवस्य सम्झिने छन्।
साँझ रेडियोबाट समाचार आउँछ – प्रदेश ७ बाट नेकपा पार्टिले हर्क मिजारलाई प्रदेश संसदमा मनोनित गरेको छ । बिहानै गाउँलेहरु फूलमाला बाजा लिएर हर्केको घरमा भेला हुन्छन। पन्चे बाजा बजाउंदै गलाभरि फूलमाला धुमधाम अविर जात्रा गरेर सम्मानका साथ गाउँ परिकारमा गर्छन।
आमाले हर्केलाई अँगालो हालेर रुँदै भन्छिन – बाबु , व्यक्तिगत सम्पति जोड्ने स्वार्थमा नलाग्नु। देशलाई सर्वोपरी ठानी नि:स्वार्थ जनताको हितमा काम गर्नु। क्यै गरेन भनि मानिस बिचलित हुनुहुँदो रहेनछ। मान्छे धर्म ईमानमा हुनुपर्छ। एकदिन समयले आफै सबैको मुल्यांकन र कदर गर्दोरहेछ।